I-FRP, iimveliso ze-FRP, I-FRP Grating-i-Donghai
Iimveliso zProfayili yeFRP
IiMveliso eziMisiweyo zeSMC
Cola isandla sePF
I-BMC Lump Molding Compound
I-Henan Donghai yeeMveliso eziManyeneyo zeMveliso Co,
Kususela ekusekweni kwayo ngo-1999, iHenan Donghai Composite Equipment Co, Ltd yomelele kwimizamo edibeneyo yabo bonke abasebenzi, kwaye inamandla obuchwephesha bobugcisa kunye nenkqubo yokuqinisekisa esemgangathweni.
I-ISO9001 yethu iqinisekisiwe ngo-2000 kunye no-ISO14001: 2004. Ngo-2016, yadlula i-TS16949 ukuqinisekiswa komgangatho weemoto kunye ne-China Railway
Inkampani yethu igunyazise amalungelo awodwa omenzi wechiza.
Inkampani iseke ubudlelwane obulungileyo bentsebenziswano kunye neeYunivesithi ezingaphezu kweshumi, amaziko ophando kunye neengcali zorhwebo ezingaphezulu kweshumi, kwaye inenkxaso eqinileyo yezobuchwepheshe.
Iimveliso eziphambili zenkampani zahlulahlulwe zaba ngamacandelo amabini: uloliwe okhethekileyo kunye nenjongo ngokubanzi.
Indawo ekhethekileyo yeFibglass Ladder Stool
I-FRP C ebunjwe yintsimbi
Ifilosofi yenkampani yeshishini: kuqala yenza abantu abanyanisekileyo, emva koko wenze umsebenzi
Kususela ekusekweni kwayo ngo-1999, iHenan Donghai Composite Equipment Co, Ltd yomelele kwimizamo edibeneyo yabo bonke abasebenzi, kwaye inamandla obuchwephesha bobugcisa kunye nenkqubo yokuqinisekisa esemgangathweni. Ngo-2005, bapasisa ukuqinisekiswa kwenkqubo esemgangathweni ye-ISO9001: 2000. Ngo-2006, yapasa u-ISO14001: 2004 ukuqinisekiswa kwenkqubo yokulawulwa kwendalo. Ngo-2016, yapasa i-OHSAS18001: 2007 ukuqinisekiswa kwenkqubo yezempilo nokhuseleko. Ngo-2016, yadlula i-TS16949 ukuqinisekiswa komgangatho weemoto kunye ne-China Railway. Uqinisekiso lweZiko loVavanyo kunye nesetifikethi seCRCC. Ngo-2016, waphumelela “iMbasa yoMgangatho woLawulo” yeNdawo yeLizwe yeXinxiang yezoqoqosho kunye nezoBugcisa. Ngo-2017, laphumelela ishishini lesizwe eliphezulu lobugcisa.
XA USELULA UKUQINISA
Cela intelekelelo yamaxabiso
Inombolo yomnxeba: +86-15560180372